Qaybta Koowaad | maktabadda | Af-Soomaaliga
20/11/2014 Taariikhda Soomaaliyeed iyo Tartanka QabiilkaDktr. Cabdisalaam Sheekh Xasanmaamul
1.1 Dalka iyo Dadka Soomaaliyeed
Dadka ku nool Soomaaliya waxaa lagu qiyaasay iney yihiin 6.38 milyan (UNDP, 2001). Cadadkaas boqolkiiba-24 waa reer magaal, boqolkiiba-17 waa beeraley iyo xoola dhaqato degan, boqolkiiba-59na waa reer guuraa xoola dhaqato ah. Dhaqaalaha Soomaaliyeed waxaa uu ku dhisanyahay xoolaha nool, kuwaas oo kala ah 5.5 milyan Geel ah, 5 milyan oo Lo’ ah, 35.5 milyan Riyo iyo Ido ah. Waxyaabaha Soomaalidu dibeda u dhoofiso waxaa ugu badan xoola nool, muuska, xabagta iyo hargaha.
Soomaaliya waxay ku taal Geeska Afrika ama Bariga Afrika. Bedka dhulka Soomaaliyeed wuxuu ka kooban yahay 637,657 km2 iyo xeeb dhererkeedu yahay 3,300 km. Dhulka Soomaaliya, wuxuu ka kooban yahay dhul xeebeed siman, Buuraleyda waqooyi ee Golis, Hawd iyo dhulka webiyada hareerahooda ah. Haddi aan soo qaadanno buuraleyda lagu magacaabo Golis, waa silsilad buuro ah oo ay ka mid yihiin Cal Miskaad iyo Cal Madow oo meelaha qaar dherarkoodu gaarayo 2,408 m.
Dhulka Hawd lagu magacaabo, wuxuu ka soo billowdaa Hargeysa illaa iyo Gaalkacyo. Hawdku waa dhul aad ugu fiican daaqsinta xoolaha nool. Waxaana badanaaba lagu dhaqdaa geela, ariga iyo lo’da. Waa dhul dhirtu ku badan tahay oo aad ugu wanaagsan daaqsinta xoolaha. Waagii hore ceelasha laga cabo way ku yaraayeen dhulka hawdka ah, laakiin hada ceelasha iyo baraagaha labaduba waa ku badan yihiin.
Dhulka webiyada Jubba iyo Shabeelle ay maraan waa dhul aad u barwaaqo badan oo ay xooluhu ka helaan baad iyo biyo ku filan intaba. Dhulka wcbiyada waxaa ku badan lo’da iyo geela.
Labada webi ee Shabeelle iyo Jubba, waxay labaduba ka yimaadaan buuraleyda Itoobiya. Webi Shabeelle wuxuu dalka ka soo galaa Gobolka Hiiraan, asagoo ku dhammaada Haawaay. Webiga Jubba asna wuxuu soo maraa Luuq, Baardheere, Jilib iyo Jamaame, wuxuuna ku darmadaa Badweynta Hindiya.
Bceraleyda dalka, waxay u qaybsamaan kuwa isticmaala biyaha webiga iyo kuwa wax ku beerta biyaha roobka. Webiga Shabeelle biyihiisa waxaa isticmaala beeraley fara badan oo biyaha webiga ku waraabsada beerahooda ayagoon isticmaalin matoor. Webiga waxaa laga soo jeexaa faro ama kanaallo biyaha gaarsiiya beeraha ku xeeran. Webiga Jubba asagu waa ka duwan yahay oo biyihiisu waa hooseeyaan waxayna inta badan bceraleydu u baahan yihiin iney isticmaalaan matooro si ay u waraabiyaan beerahooda. Beeraleyda webiyadu badanaa, waxay beertaan geed mirood (liin, cambe, babaay iwm), galleey, sisin, bariis iyo khudrado kala duwan oo aanaan halkan ku soo koobi karin.
Gobollada aan webiyadu marin sida Bay, Bakool iyo Waqooyi Galbeed, beeraleydu waxay ku tiirsan yihiin roobabka xilliyada Gu’ga iyo Deyrta ee ka da’a dalka. Waxaana ay beertaan masagada ama haruurka, qaraha, digirta iyo dalagyo kale.
Soomaaliva waxay leedahay afar xilli oo kala ah Gu’ (Abriil-Juunyo), Xagaa (Luulyo-Sebtembar), Deyr (Oktoobar-Nofembar) iyo Jiilaal (Disembar-Maarso). Xilliyada Gu’ga iyo Deyrta ayaa roobabku badanaaba ka da’aan waddanka. Xadiga roobka iyo meelaha ay ka kala da’aanna waxaa lagu qiyaasay iney yihiin sidan soo socota:
50 mm oo ka da’a xeebaha waqooyi.
500 mm oo ka da’a buuraleyda waqooyi.
150-200 mm oo ka da’a gobollada dhexe.
330-500 mm oo ka da’a gobollada koonfureed iyo koonfur galbeed.
Qowmiyad ahaan, luqad ahaan, muuqaal ahaan iyo dhaqan ahaanba Soomaalidu waxay ka mid tahay dadyowga la yiraahdo Kushiti-ga Bari, kuwaas oo farac ahaana lagu tilmaamo iney yihiin Xaamiyiin. Waxayna dhaqan-wadaag iyo luqad-wadaagba yihiin Oromada, Booranta, Saho iyo Beejo oo ku nool Itoobiya iyo Cafarta ku nool Itoobiya, Eritreya iyo Jabuuti, Reendiile-ha waqooyiga Keenya iyo Aweeraha (Boni) ku nool xeebta Laamu ee Keenya. Carabtii hore, waxay Soomaalida ku magacaabi jireen Berberiyiin sida qowmiyada Berberiga ee ku nool waqooyiga Afrika, waana halka magaca magaalada Berbera ka yimid (Laitin & Samatar, 1987).
Dadka taariikhda Soomaaliya wax ka qoray waxay sheegeen in Soomaalidu ka tirsan tahay dadyowga la yiraahdo Omo- Tana, kuwaas oo hoyga ay ka soo farcameen uu yahay meelaha ay maraan webiyada Omo iyo Tana. Webiga Omo wuxuu maraa koonfurta Itoobiya asagoo biyihiisa ku shuba laagada Turkaana ee Keenya.
Webiga kale ee Tana, asagu wuxuu ka soo bilowdaa waqooyiga Keenva wuxuuna ku darmadaa Badweynta Hindiya.
Dadkaas Soomaalidu ka soo jeeddo, waxaa la sheegay iney markii hore ku faafeen waqooyiga Keenya ayagoo soo raacay hareeraha webiga Tana ka dibna soo gaarey xeebta Badweynta Hindiya. Dadka la yiraahdo Booni ama Aweera, waxay ayagu ku hareen agagaarka Laamu, halka Soomaaliduna (Samaale) u gudubtay Koonfurta Soomaaliya. Dadka Samaalaha ah oo xoolo dhaqato ahaa ayagoo raadinaya biyo iyo daaqsin wanaagsan ayey sii socdeen illaa ay gaareen xeebaha waqooyi Bari ee Soomaaliya.
Hijradii labaad ee Soomaalida oo ku aadan bilowgii qarnigii 13aad waxay ahayd mid ay qabaa’ilka qaarkood u guureen koonfurta Soomaaliya iyo dhulka loo yaqaan Ogaadenya iyo Waqooyiga Keenya. Halka ay qaar kalena ku nagaadeen waqooyiga iyo bariga Soomaaliya. Taasina waxay dhacday kadib markii ay mashaayiikh Carbeed yimaadeen xeebaha waqooyiga dalka ayna ka guursadeen Soomaalidii halkaa deganeyd.
Raggaas waxaa ka mid ahaa Daarood Ismaaciil oo dalka yimid qarnigii 11aad. Waxaa la sheegay in Daarood ka soo degay xeebaha waqooyi bari ee dalka, asagoo guursaday gabar la oran jirey Doombiro oo Dir ahayd. Sheekh Isxaaq oo ay ka farcameen dadka ku abtirsada Isaaqa ayaa ka dambeeyey Daarood muddo lagu qiyaasay laba qarni. Daarood, wuxuu ku aasan yahay Haylaan oo galbeed kaga aaddan magaalada Badhan. Sheekh Isxaaqna, wuxuu ku aasan yahay Meydh oo ayana ka tirsan Gobolka Sanaag. Dadka waxaa lagu tilmaami jirey inay yihiin boqolkiiba-100 Muslim haddana Sunni ah. Hadase, waxaa jira dad qaatay diimo kale. Waxayse wadaagaan luqad iyo dhaqan mid ah. Waxayna ka kooban yihiin qabaa’il sida Dir, Daarood, Hawiye, Isaaq, Digil iyo Mirifle, Meheri, Baantuu, Reer Xamar, Reer Baraawe, Baajuun, Tumaal, Yibir, Yaxar, Midgaan, Muuse Dheri iwm.
Waxa ugu weyn oo isku xira dadka Soomaaliyeed waa qabiilka oo aad mooddo inuuba ka horreeyo diinta Islaamka oo ay aad ugu adag yihiin. Waxaa jirta in carruurta yaryar waxa ugu horreeya oo lagu ababiyo iney tahay abtirsiinyahooda iyo cidda ay is xigaan. Taasina waxay ubadka Soomaaliyeed dhaxalsiisa iney ku barbaaraan qabyaalada iyo ku faanka qabiilkooda, ayaga oo uqaba in qabiilkooda ka fiican yahay qabaa’ilka kale.
Maadaama ay Soomaalidu qabiilka aad ugu dhaqanto ayna tahay arrinta kaliya oo aafaysay midnimada dadka Soomaaliyeed, waxaa caado noqotay in qofkii Soomaaliya wax ka qorayaaba uu marka hore qabaa’ilka kala duwan uu u sameeyo shax uu ku tilmaamayo sida ay isu xigaan. Waxaan isku dayey inaan si isu dheelitiran u qoro shaxda qabaa’ilka hoos ku xusan.
Waxaa jira qabaa’il kale oo aan shaxdaan ku jirin, waxayna kala yihiin Meheri (Carab), Jareer (Baantuu), Wardey, Reer Xamar, Baajuun, Yaxar, Tumaal, Muuse Dheri, Madhibaan iwm. Qabaa’ilka Soomaaliyeed badanaaba, waxay u qaybsamaan beer aley, xoola dhaqato iyo kalluumaysato. Beeraleyda iyo kalluumaysatadu waa dad degan magaalooyinka ama tuulooyinka koonfurta iyo xeebaha waddanka, waxayna ku nool yihiin wixii beeraha uga soo go’a, kalluumaysi iyo ganacsiga ay ku haystaan magaalooyinka iyo tuulooyinka. Dadka xoola dhaqatadu, waxay ayaga nolashoodu ku xiran tahay xoolaha nool ee ay dhaqdaan.
Shaqada guurtidu waxay ahaan jirtay inay xalliyaan wax kasta oo khilaaf ah ama dhibaato ah oo soo foodsaara dadka ka tirsan jifadaas. Waxay lahaan jireen xeer dhexdooda ah ama kuwa ay wax kula qaybsadaan jifooyinka ama qabaa’ilka kale ee ay deriska yihiin si loo xalliyo wixii dhib ah oo yimaada. Go’aan qaadashada guurtida waa mid ku salaysan wada tashi iyo isqancin qof walba uu arrintiisa ka jeedsanayo guurtida horteeda si uu uga dhaadhiciyo arrinka uu wato ama sida wax u dhaceen. Dhinac kasta marka la dhegeysto ayaa markhaatiyaal loo yeeraa si loo helo xogta dhabta ah.
Go’aankii ay guurtidu qaadato wax diidi karaa ma jirin oo waa la qaadan jiray si ay kala dambayni u jirto: Qofkii diida fulinta go’aanada guurtida waxaa lala tiigsan jiray xeerka u yaal toolkaas. Haddii aan tusaale u soo qaadano degmo waddanka ka mid ah; qofkii diida wixii lagu xukumo, waxaa dhacda in laga gowraeo awrka qofkaasi reerkiisu uu rarto. Taas oo dhabar jab ku ah qoyska ratigii gurgur laga gowracay, maxaa yeeley way adag tahay inuu qoysku helo awr kale oo uu ku bedesho kii laga gowracay.
Waxaa caado ahayd in shirarka lagu qabto geed har weyn hoostiis. Guurtida waxaa lagu xulan jiray aqoonta diinta, waxgaradnimo iyo da’da. Talooyinka gudiga waxaa go’aamin jiray shir guddoonka oo ahaan jiray Isimka beeshaas ama jifadaas si ay kama dambays u noqoto loona fuliyo. Haddii dil ama dhaawacba yimaado waxaa lagu bixin jiray xoolo sida geel. Qofkii la dilo magtiisu waxay ahayd boqol halaad haddii uu rag yahay, haddii uu qofkaasi dumar yahay waxaa la bixin jiray konton halaad sida diintu qabto.
Xeerarka qabaa’ilku ku dhaqmaan waxaa weheliya oo ay ummadda Soomaaliyeed ku dhaqmi jirtey shareecada diinta Islaamka khaasatan axkaamta illa iyo intii diinta Islaamku soo gaartay Soomaalida. Axkaamta waxay u isticmaali jireen welina u isticmaalaan dhaxalka, simida dhibka dadka kala gaara iwm.
Sidaan la wada socono dimoqaraadiyada iyo mabaadii’da xuquuqda aadanaha ee hadda reer galbeedku ku dhaqmo waxaa kaga horreeyey Muslimiinta, oo ku dhaqmi jirey nidaamka shuurada ama wada tashiga oo aan ka helnay diinteena. Mujtamaca xoola dhaqatada ah ee Soomaaliyeed waa kuwa ku dhaqma nidaamka dimoqaraadiga ah, marka la eego wada tashiga iyo kala dambeyntooda ku aadan xukunka. Waana dad aan kala sareyn oo isku tixgeliya oo kaliya da’da, dhalashada iyo maalka. Ragga mujtamaca xoola dhaqatada ah waa kuwa dhammaantood taliya oo hadana siyaasiyiin ah (Lewis, 2000).
Hab-dhaqanka qabaa’ilka Soomaaliyeed khaasatan kuwa xoola dhaqatada ah, waxaa jiray inay ku faani jireen tirada wiilal iyo tirada xoolaha uu qoys waliba leeyahay. Labada nin oo walaalaha ah, waxaa aad loo qiimayn jiray hadba kii wiilal ama xoola badan. Meelaha qaarkooda sida Gobolka Jubbada Hoose oo lo’da aad loogu dhaqdo, waxaa jirtay in ninka xoolaha leh lagu qadarin jiray inta tiro lo’ ah oo uu leeyahay. Shirarkana waxaa ka qayb geli jiray ragga inta ugu xoolo badan.
Qabaa’ilku waxay xataa heshiis la gali jireen shisheeyaha yimaada dalkooda, kuwaas oo u qaybsan kuwa doonayay inay xiriir ganacsi ama wax wada qabsi kaleba la yeeshaan Soomaalida. Gumaystayaashii qabsaday Soomaaliya markay waddanka yimaadeen ama ay xukumayeenba, waxay la macaamili jireen madaxda qabaa’ilka hadba meesha ay joogaan. Tusaale ahaan, gumeystihii Ingiriiska markii uu waddanka soo gelayey, wuxuu heshiis la galay qabaa’ilkii Soomaaliyeed ee deganaa waqooyiga dalka. Waxaa yaala oo la hayaa heshiisyadii ay dowladii Ingiriisku la gashay qabaa’illadii Soomaaliyeed ka hor intaaney qabsan waqooyiga Soomaaliya. Heshiisyadaas waxay ku qoran yihiin harag xoolaad oo waxayna markhaati ka yihiin sida ay guurtida qabaa’illadu ula dhaqmi jireen shisheeyaha yimaada dalka.
Hab-dhaqameedka qabaa’ilka kalluumeysatada ah wey ka duwan yihiin kuwa xoolo dhaqatada ah. Bulshada kalluumeysatadu waa dad degan magaalooyinka xeebaha leh, oo nolol maalmeedkooda ka hela meherada kallumeysiga. Waa dad ka xadaarad dheer bulshada xoola dhaqatada ah, maxaa yeelay waxay xiriir ganacsi la lahaan jireen adduunweynaha sida wadamada Carabta, Afrikada Bari iyo waddamo kaleba. Waxay kaloo uga duwan yihiin Soomaalida inteeda kale, iney u nasab sheegtaan magaalooyinka ay degan yihiin sida reer Xamar, reer Baraawe, reer Marka, reer Kismaayo iyo wixii la mid ah. Taasi waxay ina tusaaleyneysaa in qabaa’ilka kala duwani oo meel wada degaa ay ka door bidayaan iney ku abtirsadaan magaalada halka ay ka sheegan lahaayeen qabaa’ilkooda kala duwan.
1.3 Maamuladii ka jirey dhulka Soomaaliyeed
1.3.1 Boqortooyadii Bunti
Taariikhda waxaa lagu hayaa, in Boqoradii Masar ee la oran jirey Xatshabsuut (Hatshepsut), iney xiriir ganacsi la lahayd Soomaalidii deganeyd xeebaha waqooyiga ee dalka Soomaaliya. Boqoradaas oo wakhtigii faraacinada Masar xukumeysey, waxay xukunka haysey intii u dhexeysey 1503dii illaa iyo 1483dii ka hor dhalashadii nabi Ciise (nabad gelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee). Qoraallo laga helay ahraamtii ay dhistay Xatshabsuut, waxay qeexayaan iney maraakiibteedu imaan jireen xeebaha waqooyiga Soomaaliya oo ay ka jirtay boqortooyo lagu magacaabi jirey Bunti. Maraakiibtii ay soo diri jirtay Xatshepsuut, waxa ay keeni jireen alaab ganacsi iyo hadiyado isugu jira looxaanta, Kuusha, mindiyaha iyo waxyaabaha dumarku isku qurxiyaan. Waxay ku bedelan jireen dahab, maydi, luubaan, fool-maroodi iyo dhir nool oo ay ku beertaan dalkooda.
Haddii aan tusaale ka bixiyo ganacsigaas aan sheegay, sanadkii 1493dii CH (Ciise Horti) Xatshabsuut waxay soo dirtay 5 markab oo ay midkiiba 30 nin looxaan ku riixayaan. Safarkaas reer Masar, waxay doonayeen iney Soomaalida ka iibsadaan xabagta meydiga iyo luubaanta oo ay u isticmaali jireen keydinta meydka dadka dhintay, uunsiga kaniisadaha iyo kareeme jirka la mariyo. Boqoradaasi waxay xukumeysey Masar muddo 22 sano ah.
Sida ay muujinayaan qoraalada iyo sawirada laga helay ahraamtii Xatshabsuut, waxaa jirey Boqor la oran jirey Barahu iyo xaaskiisii Eti oo ka talin jirey Boqortooyadii Bunti. Boqortooyadaas oo lagu qiyaasi karo iney ka dhisneyd waqooyi bari ee dalka Soomaaliya.
Arrinta ku saabsan xiriirkii ka dhexeyn jirey Faraacinadii Masar iyo Soomaalidii hore, waxay u baahan tahay in lagu sameeyo cilmi baaris, si loo helo degaanadii uu ka talin jirey Boqor Barahu. Waxaanad ku arki kartaa meel u dhow tuulada Xidid oo ku taal, inta u dhexeysa Ceelaayo iyo Laas Qorey oo labaduba ka tirsan Gobolka Sanaag raadkii faraacinadii Masar.
Waxaa kale oo jirey Boqorro kale oo ayaguna ganacsi lalahaa dadkii Soomaaliyeed ee ku dhaqnaa xeebaha waqooyi ee dalka. Waxaana ka mid ahaa boqor la oran jirey Mentuhotep, oo asagu markii taariikhdu ahayd 2500 CH soo diray maraakiib si ay u helaan meydiga iyo luubaanta Soomaaliya.
1.3.2 Saldanadii Benaadir
Taarikhyahanada Soomaaliya wax ka qora, waxay tibaaxeen in ay xeebaha Geeska Afrika yimaadeen dad asalkoodu ka soo jeedo Carab iyo Bershiyaan oo dagaano ka sameystay magaalooyinka sida Muqdisho, Merka, Baraawe, Saylac iyo Berbera. Waxaana lagu qiyaasay in dadkaas kuwii ugu soo horreeyay ay dageen magaalooyinka qarnigii sideedaad. Waxaa la sheegay in koox Bershiyaan ah oo la yiraahdo Al-Ahsa, ay ahaayeen dadkiii ugu horreyey oo dega Muqdisho. Waxaa kooxdan ka dambeeyey dad ka yimid waddamada Carabta iyo Bershiya oo ayana degay xeebaha Benaadiir. Dadkii ka yimid Bershiya oo ayagu ugu soo horreeyey degida Muqdisho, waxay degeen xaafada Shangaani. Xaafada Xamarweyne ayada, waxaa degay Carabtii ka timid Khaliijal Carab. Labada qolo mid walba wuxuu lahaa maamulkiisa u gaarka ah. Haddaba Sanadkii 1117dii, ayaa waxaa shir isugu yimid dadkii Shangaani iyo Xamarweyne deganaa, kuwaas oo iska dhex doortay suldaan la oran jirey Fakhrudiin. Suldaankaas wuxuu maamulka hayey mudo 17 sano ah (Sharif Caydarus b. Cali, 1954).
Fakhrudiin dabadi, waxaa xukunkii Muqdisho qabtay, Maxamed Shaah Xilwaani oo asaga lagu tilmaamay inuu ahaa nin bakhiil ah oo dadku ay aad uga cawdeen. Sanadkii 1265tii, maamulkii Muqdisho, waxaa la wareegay suldaan Maxamed .Cali oo Masar asalkiisu ahaa. Suldaankaas oo aad loo amaanay, intuu xukunka hayey wuxuu dhisay masaajido badan oo ay ka mid yihiin Fakhrudiin iyo Arbaca Rukun.
Sanadkii 1331dii taariikhda masiixiga, markii Ibna Batuuta socdaal ku tagey Muqdisho, waxaa xukumi jiray suldaan la yiraahdo Abu Bakar Sheekh Cumar. Sida uu ku sheegay kitaabkiisa lagu magacaabo Al-Rixla, Ibna Batuuta aad buu u amaanay boqortooyadii ka jirtey xeebaha Benaadir (Hamdun & King, 1998).
Wakhtigaas dadka reer Benaadir, waxay soo saari jireen dhar ay u dhoofin jireen Masar iyo meelo kale. Seddex qarni ka dibna xukunkii wuxuu ku wareegay salaadiintii reer Muzaffar, kuwaas oo xiriir dhow la yeeshay boqortooyadii Ajuuraanka oo ka jirtay degaanada uu maro webiga Shabeelle (Lewis, 2000).
Sanadkii 1728dii, markii Burtuqiiska laga saaray Geeska Afrika, waxaa magaalooyinka xeebaha ah xukunkoodii la wareegey Cumaaniyiintii xukumayey magaalada Sansibaar. Waxaana Muqdisho u joogey nin Qaadi ah iyo Askar aan badneyn. Sayid Barqash oo reer Sansibaar ahaa, ayaa markii taariikhdu ahayd 1871dii xukunkii Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee Merka iyo Baraawe qabtay. Sayid Barqash oo madax ka ahaa dowladii Sansibaar iyo magaalooyinkii kale ee ku yiil xeebaha Bariga Afrika, ayaa xukunka hayey intii u dhexeysey sanadihii 1871dii illaa iyo 1888dii. Sanadkii 1892dii, ayaa Talyaanigu si toos ah ula wareegey xukunkii Benaadir.
1.3.3 Saldanadihii ka jirey dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya haysato iyo Gobolka Awdal
Sida taariikhda lagu hayo, magaalada Seylac, waxay ahayd halka ay ka soo galeen Carab badan oo xiriir ganacsi iyo mid diimeedba la lahaan jirtey dadyowgii ku dhaqanaa waqooyiga iyo galbeedka Soomaaliya. Laga soo bilaabo qarnigii 9aad, waxaa ka jirey waqooyi-bari ee Qaaradda Afrika lix dowladood oo waaweyn iyo kuwa aan sidaa u sii weyneyn oo dhamaantood Muslimiin ahaa, lixda ugu waaweyni, waxay ahaayeen Shawa, Cadal, Ifat, Dawaro, Fatagar iyo Hadiya. Halkan waxaan ku soo aruuriyey macluumaad ku saabsan seddex ka mid ah dowladaha aan kor ku xusay, waxayna kala yihiin:
Dowladihii Muslimiinta ahaa ee ka jiray gobolka Geeska Afrika, waxaa ugu horreyey tii Shawa oo ka dhisnayd bariga buuraleyda Shawa. Dowladaas waxaa la dhisay bilowgii qarnigii 12aad, waxaana madax ka ahaa boqor la oran jirey Makhzuumi. Duriyadii reer Makhzuumi, waxay xukunka Shawa hayeen illaa iyo dabayaaqadii qarnigii 13aad. Waxaa jirtey in Shawa iyo Ifat oo ayana ka jirtey gobolka, ay ka dhex dhici jireen dagaallo.
Sanadkii 1285tii, Suldaankii Ifat, wuxuu ku guuleystey inuu cinqilaab ku qabsado dhulkii ay ka talineysey saldanadii Shawa. Boqortooyadii Xabashidu, waxay u arkeysey iney dowladaha Muslimiinta ah ee ka jira gobolku ay ku yihiin khatar. Waxayna dagaallo badan la gashay dowladihii Muslimiinta ahaa. Suldaan Cumar Walashma ayaa madax ka ahaa saldanadii Ifat. Sanadkii 1320kii, Amda-Siyon oo boqortooyada Xabashida u talinayey wakhtigaas, ayaa weerar ku soo qaaday saldanadii Ifat, halkaasna waxaa lagu dilay suldaankii Ifat Xaqu Diin. Wiil uu dhalay suldaankii Xaqu Diin, ayaa abaabul dagaal galay si uu isaga celiyo weerarka Xabashida. Ugu dambeystii ciidamadii Muslimiinta Ifat waa laga adkaaday, dhulkii ay xukumayeena, waxaa la wareegtey Xabashida.
Dadkii reer Ifat, waxay dib isu abaabuleen sanadkii 1332dii, ayadoo uu hoggaaminayo nin uu awoowe u ahaa suldaankii Cumar Walaashma oo la oran jirey Sabrediin. Suldaan Sabrediin, wuxuu isu dumay ciidan farabadan, waxayna dib u qabsadeen meelo badan oo ay Xabashidu hore Ifat uga qabsatay. Mar kale ayaa boqorkii Xabashidu weerar ku soo qaaday Ifat, asagoo Sabrediin ku qabtay gobolka Dawaro. Wixii ka dambeeyey dagaalka aan kor ku soo sheegnay, dowladihii Muslimka ahaa ee Ifat, Dawaro, Sharka iyo Bali dhammaantood, waxaa qabsaday boqortooyadii Xabashida.
Sacaada Diin iyo Xaqu Diin 2aad oo walaalo ahaa, ayaa diidey iney isu dhiibaan xukunka Xabashida, waxayna ciidamo ku urursadeen Dakar, halkaas oo ay ka aasaaseen dowlad la yiraahdo Cadal. Ciidamadii Xabashida oo damacsanaa inuusan soo noolaan xukunka dowladaha Muslimiinta ayaa weerar ku soo qaaday ciidamadii Muslimiinta. Markii uu dhintay suldaankii Xaqu Diin 2aad, waxaa xukunkii qabtay walaalki Sacaada Diin. Sacaada Diin wuxuu weeraro ba’an ku qaaday ciidamadii Xabashida. wuxuuna madax ka ahaa dowladii Cadal sanadihu 1373dii illaa iyo 1403dii. Meelaha uu ku dagaalamay waxaa ka mid ahaa degmooyinka Dawaro iyo Bali oo horey uga tirsanaan jirey dowladii Ifat Ciidankii Sacaada Diin, waxaa jabiyey ciidan uu watey Boqorkii Xabashida oo la oran jirey Dawit. Haraagii ciidankii Sacaada Diin, waxaa la cayrsanayey illaa iyo jasiirad u dhow Seylac, halkaas oo lagu dilay suldaankii Sacaada Diin. Jasiiradaas hadda waxaa la yiraahdaa Sacaada Diin, waxaana loogu magac daray suldaankaas.
Suldaan Sacaada Diin wuxuu dhalay toban wiil oo ay ka mid ahaayeen Sabre Diin (1409-18), Mansuur (1418-25), Jamaal Diin (1425-32) iyo Axmed Badlay (1432-45) oo dhammaantood isaga dambeeyey xukunka kadib markii aabahood la diley. Dowladii Cadal markii la ridey wiilashii Sacaada Diin, waxay u baxsadeen Yemen, halkaas oo ay ka soo noqdeen dhowr sano kadib si ay u xoreeyaan dhulkii Muslimiinta laga qabsaday.
Sabre Diin oo ugu weynaa ayaa dib u abaabuley ciidamadii dowladii Cadal sanadkii 1409kii. Raggan oo afartuba madax ka noqday dowladii Cadal taariikhaha kor ku xusan ayaa soo celiyey intii badneyd dhulkii ay Cadal xukumi jirtey. Dagaaladaasna, waxay ku dileen Boqor Tewodros (1412-13) iyo Yishaq (1413-30) oo labaduba madax ka ahaa Boqortooyadii Xabashida. Wakhtigii Axmed Badlay uu suldaanka ka ahaa Cadal, waxaa ciidankii Muslimiintu gacanta ku dhigeen gobolka Bali. Suldaan Axmed Badlay, waxaa lagu dilay dagaal ka dhacay Dawaro sanadkii 1445. Xaruntii Dowladii Muslimka ahayd ee Cadal, waxay markii hore ahayd Dakar, kadibna Harar ayaa loo soo raray.
Suldaan Maxamed, oo madax ka ahaa Cadal sanadihii 1488dii illaa iyo 1518kii, ayaa u xilsaaray nin la oran jirey Maxfuus inuu madax ka noqdo ciidamadii Muslimiinta. Maxfuus oo lahaa shacbiyad xoog leh, wuxuu weerar ku qaaday degaanadii horey Muslimiinta looga qabsaday oo ay ka mid ahaayeen, Fatagar, Dawaro iyo Bali.
Dagaaladaasna Muslimiintu guulo xoog leh ayey ka soo hooyeen. Sanadkii 1516kii Boqorkii Xabashida ee Lebna-Dengel iyo ciidan uu wato, ayaa gaadmo ku diley taliyihii ciidanka Muslimiinta Maxfuus. Suldaan Maxamed asna, waxaa diley Muslimiin ka soo horjeedey xukunkiisa.
Sanadkii 1520kii, xukunkii Gadal waxaa qabtay Suldaan Abuu Bakar oo ahaa wiil uu dhalay suldaan Maxamed. Waxaa jirey dad aan aqoonsaneyn suldaanimada Abuu Bakar oo u arkayey inuu yahay nin jilicsan oo aan dooneyn in lala dagaalamo Xabashida. Dadka ka soo horjeeda Suldaan Abuu Bakar, waxaa madax u ahaa nin dhallin yaro ahaa oo magaciisa la oran jirey Axmed bin Ibraahim Al-Qaasi (Axmed Gurey), asaga ayaana markii dambe dowladii Muslimiinta madax u noqday. Axmed Gurey, waxaa taageero buuxda siiyey Culumadii Cadal, waxaana la siiyey darajada Imaam. Imaam Axmed, wuxuu ku dadaaley inuu dhiso ciidan farabadan oo uu kula dagaalamo ciidanka Xabashida.
Ciidamadii la dagaal galay Axmed Gurey, waxaa ka mid ahaa sida meelo badan lagu xusay qabaa’ilka kala ah Dir, Daarood iyo Isaaq. Sanadihii 1525 iyo 1526kii, Imaam Axmed wuxuu weerar ku qaaday degmada Dawaro oo ay Xabashidu Ifat ka qabsatay. Ciidamadii Xabashida dagaalkaas waxaa ka soo gaarey dhibaato xoog leh. Sanadkii 1529kii, Axmed Gurey iyo ciidamadiisu waxay dharbaaxo xun ku dhufteen ciidankii Xabashida, ayadoo dagaal ku dhex maray meesha lagu magacaabo Shimbra-Kure. Sanadii 1529 ciidankii Axmed Gurey waxay qabsadeen Dawaro. Sanadkii ku xigena waxay qabsadeen Bali. Sanadkii 1531dii ciidamadii Muslimiintu waxay ka sifeeyeen haraagii Xabashida degaanada ku xeeran Shawa.
Boqorkii Xabashidu, wuxuu u cararay buuraleyda Amxaarada, kadib markii la diley intii badneyd taliyeyaashii ciidamada. Imaam Axmed meesha uu u cararaba waa uga daba tegey Boqorkaas oo la oran jirey Lebna-Dengel, illaa uu ka gaaro Tigre. Intii uu dagaalka wadey Imaam Axmed meeshii uu qabsadaba, wuxuu u magacaabi jirey guddoomiye, kaas oo hoos imaanaya maamulka dowladii Islaamka ee Cadal.
Boqorkii Lebna-Dengel, wuxuu geeriyoodey sanadkii 1540kii, boqortooyadiina waxaa la wareegay wiilkiisii Galawdewos. Lebna-Dengel intaanu dhiman wuxuu qaylo dhaan u dirsaday wadamadii Masiixiga ahaa ee reer Yurub, asagoo weydiistey in ciidamo iyo hub lala soo gaaro.
Dowladii Burtuqiiska oo ka jawaabeysa codsigii Boqorkii Xabshida ayaa soo dirtay ciidamo iyo hub si loo soo celiyo dhulkii Xabashida laga qabsaday. Imaam Axmed waxaa lagu diley dagaal ay isaga horyimaadeen ciidamadii Xabashida iyo kuwii Burtuqiiska ahaa oo wada socday.
1.3.4 Saldanadii Waqooyi Bari
Laga soo bilaabo bartamihii qarnigii 18aad, gobollada Waqooyi Bari ee Soomaaliya, waxaa ka jirtey boqortooyo soo jireen ahayd. Sanadkii 1860kii boqortooyadan, waxaa madax ka noqday Boqor Cismaan Maxamuud. Waxaa jirey tartan ka dhexeeyey Boqor Cismaan iyo Suldaan Yuusuf Cali Keenadiid oo Hobyo xaruntiisu ahayd. Sanadkii 1901dii, waxaa dhacday in ciidamadii Boqor Cismaan ay qabsadeen laba degmo oo ka tirsaneyd Gobolka Mudug oo markaa uu xukumayey Yuusuf Cali. Giulio Pestalozza oo ahaa qunsulkii Talyaaniga ee Cadan, ayaa warqad u gudbiyey Boqor Cismaan asagoo ka codsaday in ciidamadiisu ka baxaan degmooyinka ay qabsadeen. Codsigaas Boqor Cismaan waa u diidey, waxaana ay taasi keentay in is-afgaranwaa uu dhexmaro labada dhinac.
Sida laga wariyey Talyaaniga, waxaa jirtey in Boqor Cismaan warqad u qoray Dowladii Islaamka ahayd ee Turkiga, asagoo weydiisanaya taageero ciidan, sheeganayana inuu xukumo boqortooyo madax banaan oo ka jirta Geeska Afrika. Ariintaas Talyaaniga aad bay uga careysiisay, waxayna keentay in Markab Talyaanigu lahaa oo la oran jirey Votla uu duqeeyo magaalooyinka xeebaha ku yaal sida Bareeda iyo Boosaaso. Duqayntaasi waxay waxyeello u geysatay ciidamadii iyo saanadii u tiil Boqorka. Talyaaniga oo qabsaday magaalooyinka xeebaha ku yaal sida Caluula, Boosaaso, Bareeda iyo Murcanyo awgeed, Boqor Cismaan wuxuu u guurey meel ka durugsan xeebaha, si uu u abaabulo dagaal ka dhan ah Talyaaniga.
Talyaaniga oo ka cabsi qabay in Daraawiishi ku soo duusho deegaanada uu haystay ee Benaadir iyo asagoon hubin inuu sii haysan doono dhulka uu ka qabsaday Boqor Cismaan, ayaa waxay ku kaliftay inuu wadahadal la galo Boqorka. Labada dhinac, waxay heshiis kala saxiixdeen bishii Maarso 1910kii.
Kadib markii Ingiriisku jabiyey ciidamadii Daraawiishta, faashiistihii Benito Mussolini oo Talyaaniga madax ka ahaa, wuxuu ku dhiiraday inuu ka takhaluso Boqortooyadii Waqooyi Bari iyo tii Hobyoodba. 10kii bishii Luulyo 1925tii, dowladii Talyaanigu waxay amartay wakiilkeedii De Vecchi inuu jebiyo wixii heshiisyo ahaa ee ay la galeen Boqor Cismaan iyo Cali Yuusuf Keenadiid. Guddoomiyihii Talyaaniga De Vecchi, wuxuu warqado u kala diray Boqor Cismaan iyo Yuusuf Cali asagoo ku amray iney is dhiibaan hubkana ku soo wareejiyaan.
Ciidamadii Talyaanigu markii ay ka adkaadeen suldaan Cali Yuusuf, waxay bilaabeen iney dagaal ku qaadaan Boqor Cismaan. Qunsulkii Talyaaniga ee Caluula oo la oran jirey E. Koronaro, ayaa digniin kama dambeys ah ku bixiyey in Boqorku is dhiibo hubkana dhigo.
Intaa waxaa soo raacey in Talyaanigu soo dhoobay ciidamo xeebaha bari ee dalka. 7dii bishii Oktober 1925tii, waxaa dagaal culusi ku dhex marav labadii ciidan magaalooyinka Xaafuun iyo Caluula. Maraakiibta Talyaaniga oo ayana joogay xeebaha ayaa duqeyn ba’an u geystey doonyihii shacabkii ku noolaa deegaanadaas. Talyaaniga oo ay ka go’nayd iney ridaan boqortooyada, waxay diideen iney wax wadahadal ah la galaan boqorka. 23kii Oktober, Talyaanigu wuxuu soo qaadey dagaal ballaaran oo ay dhulka la simeen magaalooyin ay ka mid tahay Baargaal.
Arrintu si kastaba ha ahaatee, xaaladu ma noqon sidii Talyaanigu maleynayey, waxaana bilowday kacdoon ballaaran oo looga soo horjeedo Isticmaarka. Bishii Disember 1925tii, ciidamo uu wato wiil uu dhalay Boqor Cismaan oo la oran jirey Xirsi Boqor, ayaa dagaal rogaal celin soo qaaday oo ciidankii Talyaaniga ka saaray magaaloyinka Hurdiya iyo Xaafuun. Wuxuuna kaloo khasaaro lixaad leh ugu geystey ciidankii Talyaaniga ee ku sugnaa Raas Gardafuuy oo ku taal Badweynta Hindiya. Sanadkii 1926dii, Talyaanigu wuxuu bilaabay inuu ku durko gudaha dalka, halkaas oo uu kala kulmay iska caabin xoog leh oo uga timid dadkii shacabka ahaa.
Dabayaaqadii sanadkii 1927dii, Kadib markii Boqorka ciidamadiisa laga go’doomiyey xeebaha, loona diidey inuu soo degsado hub iyo rasaas, Talyaanigu wuxuu ku guuleystey inuu qabsado Iskushuban iyo meelo badan oo gobolka ka tirsan. Boqor Cismaan wuxuu u baxsaday dhulkii Ingiriisku haystey, waxaase dib loogu soo celiyey Talyaaniga oo uu markii dambe isu dhiibey.
1.3.5 Saldanadii Seylac
Saldanadii ka jirtey magaalada Seylac, waxaa madax ka ahaa Xaaji Sharmarke Cali Saalax oo fadhigiisu ahaa Seylac. Sanadkii 1854tii, Seylac waxaa sahan ku maray nin Ingiriis ah la oran jirey Richard Burton oo ka yimid Cadan. Richard Burton wuxuu markaas Seylac ku tilmaamay magaalo qadiimi ah oo ay wax uga soo degaan dadka ku nool illaa iyo Harar. Xaaji Sharmarke oo nin taajir ahaa, wuxuu xukunka qabtay sanadkii 1840kii.
1.3.6 Saldanadii Hobyood
Bartamihii qarnigii 19aad waxaa jirey loolan xoog leh oo ka dhexeeyey boqor Cismaan Maxamud iyo Yuusuf Cali Keenadiid oo ay xigto ahaayeen. Loolankaasi oo socday mudo shan sano ah kadib, Keenadiid wuxuu u baxsaday Yemen. Wuxuuna soo noqday toban sano kadib, asagoo wata rag uu ka soo kaxaystay Xadarmuud iyo rag markii hore ka raacay Bari. Markaas wuxuu ku soo degey Hobyo oo uu ka sameystay xukun ka madax banaan kii Boqor Cismaan.
Saldanadan oo xukumeysey dhul aad u ballaaran, ayaa heshiis la saxiixatay Dowladii Talyaaniga. Heshiiskaas wuxuu dhigayey in Talyaanigu kor ka ilaaliyo Saldanada Hobyood islamarkaasna uu Keenadiid ilaaliyo danaha Talyaaniga ee dhulka uu ka taliyo. Xukuumada ka jirtey Hobyo, waxaa hoos imaan jirey dadka ku dhaqan gobollada Mudug iyo Galguduud. Suldaan Keenadiid iyo Boqor Cismaan waxaa ka dhexeeyey tartan xagga siyaasadda ah, kadib markii ay isku qabteen xukunka waqooyi bari iyo xuduudaha labadooda boqortooyo. Keenadiid, wuxuu Hobyo ka talinayey intii u dhexeysey 1878dii illaa iyo 1925kii.
Faashiistihii Talyaaniga ayaa amar ku bixiyey in Suldaan Cali Yuusuf uu isdhiibo, kadib markii Talyaaniga uu galay damae ah inuu gacanta ku dhigo dhammaan gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya. Arrintaa ayada ah Keenadiid waa u cuntami weydey, Waxaana dhacday in bishii Oktober 1925tii ciidamadii Talyaanigu qabsadeen magaalooyinka Hobyo, Ceel Buur iyo Gaalkacyo. Ciidamadaas oo lagu magacaabi jirey Zaptie, waxay gacanta ku dhigeen Suldaan Cali Yuusuf Keenadiid.
9kii bishii Nofember isla sanadkaas ciidamo daacad u ahaa suldaanka oo uu watey Cumar Samatar, ayaa qabsaday magaalada Ceel Buur. Taasi waxay dhiirigelisey in shacabku ka horyimaado isticmaarkii Talyaaniga. Waxaana ku xigtey in Ceel Dheerna ay hoos timaado ciidamadii Cumar Samatar. Talyaanigu wuxuu isku deyey inuu dib u qabsado Ceel Buur, waase lagu jabiyey dagaalkaas. 15kii Nofember ciidankii Talyaanigu wuxuu dib ugu gurtay Bud Bud, waxayna halkaas kala kulmeen dagaal culus oo aad loogu jebiyey. Dhacdadii ku xigtay, waxay ahayd markii taliye sare oo la oran jirey Splendorelli iyo ciidan uu watey lagu laayey meel u dhexeysa Bud Bud iyo Buulo Berde.
Faashiistihii Talyaaniga oo aad uga cabsi qabey iney arrintani noqoto sidii dagaalkii uu ku qaaday Itoobiya kaas oo lagaga adkaaday Talyaaniga, ayaa bedeley xeeladiisii dagaal oo bilaabay inuu kala qaybiyo shacabka Soomaaliyeed, markaana ayaga isu adeegsado. Qorshahaasi waa hirgalay, ciidamadii Cumar Samatarna waa la jabiyey.
1.3.7 Saldanadii Sanaag
Waxaa ayana jirtay saldanadii Suldaan Maxamud Suldaan Cali Shire oo ka jiri jirtay Gobolka Sanaag. Suldaanka oo ahaa nin aad u firfircoon, waxaa xarun u ahayd Xubeera oo ku taal degmada Badhan. Suldaanku wuxuu dadaal dheeraad ah u galay sidii uu uga madax banaanaan lahaa Isticmaarkii Ingiriiska iyo Daraawiishtii Maxamed Cabdulle Xasan oo labaduba doonayey inuu xukunkooda hoos yimaado. Suldaanka markii dambe, waxaa Ingiriisku u masaafuriyey jasiirada Siishelis (Seychelles) oo ku taal Badweynta Hindiya, halkaas oo uu ku xirnaa mudo 7 sano ah. Mudadaa kadib Suldaan Maxamud Cali Shire, waxaa Ingiriisku ku soo celiyey Gobolka Sanaag.
1.3.8 Boqortooyadii Ajuuraan
Boqortooyadan oo ka jirtey Gobolka Shabeellada Hoose, waxaa ay ahayd boqortooyo xoog leh oo xiriir dhowna la lahayd Maamuladii ka jiri jirey Muqdisho. Waxaa lagu tilmaamaa iney boqortooyadani ka talineysey Gobolka Shabeellada Hoose intii u dhaxeysey qarnigii 15aad illaa iyo kii 17aad, markaas oo Muqdisho ay xukumayeen salaadiintii reer Muzafar. Waxaa kale oo la sheegay in xukunkeedu gaarsiisnaa laga bilaabo Shabeellaha Hoose illaa Baardhere iyo Luuq.
Sida uu qoray Shariif Caydaruus Ajuuraanku, waxay ka yimaadeen Masar. Markii ay xukunka qabsanayeena, waxay garab ka heleen dadkii xeebaha Benaadir deganaa oo asalkoodu ahaa Carab iyo Bershiyaan. Suldaankoodii ugu horreeyey oo la oran jirey Imaam Cumar, wuxuu saldhig ka dhigtay meel u dhow magaalada Marka. Maamulkii Ajuuraan degaanka ay ka talinayeen, waxay ka qodeen ceelal badan, waxayna horumariyeen beeraha.
Warar laga helay waxgarad ku dhaqan degaanka Afgooye iyo nawaaxigiisa iyo qoraalada taariikhiga ahiba, waxay tibaaxayaan in xukunkii boqortooyadani uu aad u qallafsanaa oo uu gaaray heer ay dadku u adkeysan waayeen. Taasina waxay sababtay in qabaa’ilkii Soomaaliyeed ee ay xukumeysey isu bahaysteen markaasna ay xoog uga saareen meelihii ay u talineysay.
1.3.9 Saldanadii Geledi
Magaalada Afgooye, waxaa ka jirey Saldanad ay madax ka ahaan jireen Gelediga dega Afgooye. Waxaa la sheegay iney jirtey intii u dhexeysey 1843 illaa iyo 1908dii, markaas oo isticmaarkii Talyaanigu taladii kala wareegey. Waxaa la ii sheegay iney Boqortooyadii Ajuuraanku ay markii hore ka talin jirtey Afgooye iyo nawaaxigeeda, dadkana ay ku haysey dhibaatooyin fara badan. Wareysi lala yeeshay dad reer Afgooye ah, waxay sheegeen in Geledi iyo dadkii kale ee magaalada deganaa inay isbahaysi la sameysteen qabiilka Wacdaan si loo jebiyo Ajuuraan. Waxay ku guuleyteen iney ka saaraan Ajuuraan Gobolka Shabeellaha Hoose oo ay geeyeen illaa iyo Baardheere. Markaa kadib ayey dhalatay saldanada Geledi oo ay hoos imaan jireen qabaa’ilka degan gobolka oo dhammi. Waxaa kaloo la sheegaa in Wacdaanka degan Afgooye ay soo degeen magaalada kadib markii laga saaray Ajuuraan.
1.4 Qaybsashadii Dhulka Soomaaliyeed
1.5 Dhaqdhaqaaqyadii gobanimadoonka
1.5.1 Halgankii Sayid Maxamed Cabdille Xasan
1.5.2 Gobanimadoonkii SYL iyo SNM
Kadib markii Ingiriisku jebiyey Talyaanigii gumeysanayey dalka qaybo ka mid ah, dadka Soomaaliyeed waxay heleen fursad ay kaga doodaan isticmaarka iyo waxyeeladiisa. Waxaa kaloo jirey dad aqoonyahano ah oo la soo shaqeeyay isticmaarka fahamsanaana xorriyadu waxay tahay, kuwaas oo doonayey iney ridaan reeryada gumeystayaasha qaybsaday waddanka. Arrimahaas oo dhan ayaa sabab u noqday in uu sameysmo Ururkii Dhalinyarada Soomaaliyeed (SYC) bishii Maajo 1943dii. Magacaas markii dambe waxaa loo bedelay SYL oo noqday mid ay ku soo hirtaan dadka u dagaalamaya xorriyadooda. Ururkan waxaa aasaasay 13 dhalinyaro Soomaaliyeed ah, waxayna ujeedadooda weyni ahayd in dhulka Soomaaliyeed ee la qaybsaday uu wada xoroobo, magacyadooduna waa sidatan hoos ku xusan:
Yaasiin Xaaji Cismaan Sharmarke
Cabdulqaadir Sheikh Sakhaawadiin
Xaaji Maxamed Xuseen Xaamud
Daahir Xaaji Cismaan Sharmarke
Cali Xasan Cali
Siyidiin Xirsi Nuur
Maxamed Cabdalle Xayeesi
Ingiriiska oo markaas haystay dalka, wuxuu damcay inuu isu keeno shanta Soomaaliyeed oo ay asaga hoos yimaadaan. Waxaa taas ka soo horjeestay labadii waddan ee kale oo kula jiray gudiga Qaramada Midoobey, waxayna kala ahaayeen Mareykanka iyo Midowga Sufyeeti. Waxaana dadaal weyn sameysay dowladii Xabashida oo ka dhaadhicisay Mareykanka in aan talada Ingiriiska la yeelin si ay u sii haysato dhulka ay gumeysato ee Soomaali Galbeed.
Waxaa ayana jirtay, in ururkii SNL uu ka sameysmay gobolada waqooyi ee Ingiriisku gumeysan jirey. Labadan urur ee SYL iyo SNL, waxay sameeyeen kicin iyo baraarujin dadka lagu baraarujinayo dhibaatooyinka gumeystayaashu dalka iyo dadkaba ku hayaan.
Ururka SYL, wuxuu xarumo ka furtay magaalooyinka Soomaaliyeed dhammaantood si loola dagaalamo isticmaarka magac kasta ha lahaadee. Waxaa jirtay in Xabashidu aad ula dagaalantay dhaqdhaqaaqii gobanimadoonka ah ee SYL. Xabashidii dadkaas waxay ula dhaqantay si waxashnimo ah oo qofkii ay doontana way dili jirtay, qofkii kalena xabsiga ayuu ku dhiman jirey. Sanadkii 1948dii, markii Ingiriisku ku wareejiyey dhulka Soomaali Galbeed Xabashida, waxaa mudaaharaadyo sameeyay dad ka tirsanaa SYL kuwaas oo ka soo horjeeday tillaabaas Ingiriisku qaaday. Waxaa dhacdadaas ku dhintay 25 qof in badan oo kalena way ku dhaawacantay.
Dagaaladii dadkii ka tirsanaa SYL ay galeen waxaa ka mid ahaa Hanoolaato iyo Dhagaxtuur oo Muqdisho ka dhacay. Magaalada Muqdisho, ururka SYL xoog ayuu ku lahaa. Isticmaarkii Talyaaniga wuxuu isku dayey inuu caburiyo kacdoonka ka soo horjeeda xukunkiisa, laakiin taas kuma guuleysan oo waxaa lagala horyimid iska caabin xoog leh.
1.5.3 Doorashooyinkii Xorriyadda ka Horreeyay
Doorashadii ugu horreysay waxay dalka ka dhacday sanadkii 1954kii, taas oo loo tartamayey xubnaha ka qaybgalaya dowladaha hoose ee Koofurta Soomaaliya. 21kii xisbi ee tartanka galay, SYL waxay heshay boqolkiiba 48, Xisbiga Digil Mirifle (HDM) waxay heleen boqolkiiba 22.
Doorashadii taas ku xigtay, waxay dhacday 1956dii, oo ahayd markii ugu horreysay oo doorasho guud dalka laga qabto. Natiijadiina waxay noqotay SYL oo heshay 43 xubnood, HDM oo heshay 13 xubnood iyo xisbiyada yaryar oo helay 3 xubnood. Doorashadan kadib, Cabduilaahi Ciise oo SYL ka tirsanaa, ayaa maamulkii Talyaanigu u doortay inuu soo dhiso dowlad Soomaaliyeed (Laitin & Samatar, 1987).
Waxaa jirtay inaan qabaa’il badani ka dhex muuqan dowlada SYL soo dhistay, lagana xumaaday habdhaqanka madaxda SYL iyo sida dad yar oo dhowr qabiil ka koobani u marooqsanayaan xukunka dowlada. Taasi waxay dhalisay inuu sameysmo xisbi kale oo ka soo horjeeda SYL, waxaana la oran jirey Xisbigii Soomaali Weyn (GSL). Sanadkii 1959kii, markii la qabanqaabinayey doorashadii ugu dambeysey ee Talyaanigu maamulayey waddanka, maamulkii ay hogaamineysay SYL, wuxuu xirxiray boqolaal ka tirsanaa xisbiyadii ka soo horjeeday sida xisbigii GSL. Taasina waxay keentay in SYL ay hesho 83 ka mid ah 90kii xubnood ee baarlamaanku ka koobnaa.
Haddii aan soo qaadano gobollada waqooyi oo markaas Ingiriisku maamulayey sanadkii 1959kii ka hor doorashooyinka iyo xisbiyada siyaasiguba mamnuuc ayey ahaayeen. Maamulkii Ingiriiskuna asaga ayaa qabaa’ilka ka soo xuli jirey dadka maamulkiisa ka qayb gelaya. Doorashadii ugu horreysayna waxay waqooyiga ka dhacday 1959kii, taas oo uu qaadacay xisbigii SNL. Intaa waxaa ku xigay doorashadii la qabtay bishii Feberaayo 1960kii, oo loo tartamayey 33 xubnood oo baarlamaanku ka koobnaa. Xisbigii SNL oo uu hogaaminayey Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, wuxuu ku guuleystay 20 ka mid ah 33da xubnood oo baarlamaanku ka koobanaa. Isla doorashadaas, xisbiga la oran jirey NUF wuxuu helay 1 xubin halka xisbiga USPna uu heshay 12 xubnood.
Bishii Abriil 1960kii, Ingiriisku wuxuu si kadis ah ugu dhawaaqay inuu xorriyad siinayo waqooyiga Soomaaliya maalmo ka hor marka uu Talyaanigu xorriyad siiyo koofurta Soomaaliya. Ingiriisku wuxuu ka baxay gobollada waqooyi ee Soomaaliya 26kii bishii Juunyo 1960kii, taas oo 4 casho ka horreysay markii ay xoroobeen gobollada koofureed oo ku beegnayd 1dii bishii Luulyo 1960kii Wada xaajood dhowr bilood qaatay kadib, 1dii Luulyo 1960kii waxaa midoobey labadii qaybood oo ay Ingiriiska iyo Talyaanigu kala gumeysanayeen.
← Gogoldhig	Qaybta Labaad →
5 thoughts on “Qaybta Koowaad”
Waxaan rabay inaan wax yar ka saxo qoraalka la xidhiidha boqortooyadii Geladi. Arrinka aad sheegtay taariikhdu wey xustay balse kooxda ay u midoobeen Geladi iyo Wacdaan ma ahayn Ajuuraan, waayo boqortooyadii Ajuuraan wey ka horreysay waqtigaa oo waxay xukunka ku wareejisay boqortooyadii Silcis, cidda ay Geladi iyo Wacdaan isu bahaysteen waxay ahayd Boqortooyadii Silcis.
17/01/2015 at 13:40
Wacalaykum salaam, walaal Cabdikariim.
Waan helnay sixiddaada, waana u gudbineynaa qoraaga, inshaa Allaah.
Waxaa iga su’aal ah qabiilka Hubeer waxaad dhahdeen waa Mirifle Sagal marna Shan Caleemood. Waxaan rabaa abtiriska qabiilka iyo meesha uu galo waayo marna waa Digil marna waa Mirifle, bal inoo sharaxa arrinkaas.
Pingback: Soomaalida Maanta.
Leave a Reply to Cabdikariim	Cancel reply